ओल्ड टेस्टामेन्ट मा येशू - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
भगवान > छोरा > पुरानो नियममा येशू
पुरानो नियममा, परमेश्वर प्रकट गर्नुहुन्छ कि मानिसजातिको नितान्त उद्धारकको आवश्यकता छ। मानिसहरूले मुक्तिदाताको खोजी गर्नुपर्ने ठाउँमा परमेश्वर प्रकट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यो मुक्तिदाताको उपस्थितिको धेरै चित्रहरू दिनुहुन्छ ताकि हामी उहाँलाई देख्यौं हामी उहाँलाई चिन्न सक्छौं। तपाईं पुरानो नियमको येशूको ठूलो चित्रको रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ। तर आज हामी पुरानो नियममा येशूका केही चित्रहरू हेर्न चाहन्छौं जुन हाम्रो मुक्तिदाताको स्पष्ट चित्र पाउन सकिन्छ।
उत्पत्ति in मा हामीले येशूको बारेमा सुनेको पहिलो कुराको कथाको सुरूमै हो। परमेश्वरले संसार र मानिसहरू सृष्टि गर्नुभयो। तपाईं खराबीको बहकाउमा पर्नुहुनेछ। तब हामी देख्छौं कि कसरी सबै मानवताले यसको नतीजा भोग्छन्। सर्प यस दुष्टको मूर्त रूप हो। भगवान्‌ले सर्पलाई १ said पदमा भन्नुभएको छ: «म तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र उनको सन्तानको बीचमा दुश्मनी हालिदिनेछु। उसले तिम्रो टाउको कुद्नेछ र तिमीले उसको कुर्कुरामा कोर्रा लाउनेछौ। ” सर्पले यस गोल जितेको हुन सक्छ र आदम र हव्वालाई पराजित गरेको हुन सक्छ। तर भगवान्‌ भन्छन् कि तिनीहरूका सन्तानले अन्तमा सर्पलाई नाश गर्नेछ। त्यो एक आउँछ जो ...
1. Wird den BÖSEN vernichten (1. Mose 3,15).
यो मान्छेले सर्पको हातबाट कष्ट पाउनेछ; विशेष गरी उसको खुट्टा घाइते हुनेछ। तर त्यसले साँपको टाउको कुच्यानेछ। उसले पापी जीवनको अन्त गर्नेछ। राम्रो विजय हुनेछ। इतिहासको यस विन्दुमा हामीलाई यो थाहा छैन कि आउनेवाला को हो। के यो आदम र हव्वाको जेठो सन्तान हो वा जो दस लाख वर्ष पछि आउँछ? तर आज हामी जान्दछौं कि येशू एक हुनुहुन्छ जो आउनु भयो र क्रूसमा काँटी ठोकेर झुक्नु भएको थियो। क्रूसमा उसले दुष्टलाई परास्त गर्यो। अब सबैले ऊ दोस्रो पटक शैतान र सबै दुष्ट शक्तिहरूको छुटकारा दिन आउने अपेक्षा गर्दछ। मलाई लाग्छ कि म भविष्यको भेट्टाउन दृढ उत्साहित छु किनकि उसले मलाई नष्ट गर्ने यी सबै चीजहरूको अन्त्य गर्नेछ।
इस्राएलले यस बिचारको वरिपरि सम्पूर्ण संस्कृति बनाउँदछ कि कोही त्यस्तो मानिस आउँछ जसले मानिसलाई बलिबाट ​​भेडाहरूको पाठोबाट बचाएर पापबाट बचाउँछ। त्यो सम्पूर्ण बलिदान प्रणाली र समारोह थियो। बारम्बार भविष्यवक्ताहरूले हामीलाई उनको बारेमा दर्शन दिए। पैगम्बर मीका को एक महत्वपूर्ण एक मुक्तिदाता कुनै विशेष ठाउँ बाट आउनेछैन भनेर भन्छन्। ऊ न्यु योर्क, एलए वा यरूशलेम वा रोमबाट आएको होईन। मसीह ...
2. Wird kommen aus einem Ort »von der hintersten Provinz» (Micha 5,1).
"अनि तिमी, बेतलेहेम एफ्राटा, जो यहूदाका शहरहरूमध्ये सानो थोरै पनि छौ, मबाट मकहाँ आउनुहुनेछ, जो इस्राएलको राजा हुनुहुन्छ।"
Bethlehem ist das, was ich liebevoll «kleine dreckige Kleinstadt» nenne, klein und arm, auf Landkarten kaum zu finden. Ich denke an kleine Städte wie Eagle Grove in Iowa. Kleine, unbedeutende Städte. So war Bethlehem. Daher sollte er kommen. Wenn Sie den Heiland finden wollen, sehen Sie sich die dort geborenen Leute an. ("Erste werden Letzte sein".) Dann, drittens, dieser ...
3. Wird von einer JUNGFRAU geboren werden (Jesaja 7,14).
"यसैले प्रभु आफैंले तपाइँलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ: हेर, एक कुमारी बच्चा संग छ र एउटा छोरालाई जन्म दिनेछ, जसको नाम उसले इमानुएल राख्नेछ।"
ठिक छ, यसले हामीलाई उसको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। उनी केवल बेतलेहेममा जन्मेका थोरै व्यक्तिहरूमध्येका एक मात्र हुनेछन्, तर ऊ एक केटीमा जन्मिनेछ, जो प्राकृतिक तरिका बिना गर्भवती भयो। अब जुन हामीले हेर्दैछौं क्षेत्र तंग हुँदै गइरहेको छ। अवश्य पनि, अब र त्यस पछि तपाईले एउटी केटी पाउनुहुनेछ जसले भन्छन कि उनको कुमारी कुमारी जन्म छ, तर झुठ हो। यद्यपि त्यहाँ केहि कम हुनेछ। तर हामीलाई थाहा छ कि यो मुक्तिदाता बेतलेहेमको केटीमा जन्मेको थियो जसले कम्तीमा पनि कुमारी हुँ भनी दाबी गर्‍यो।
4. Angekündigt durch einen BOTEN (Maleachi 3,1).
«हेर, म मेरो दूत पठाउनेछु, जसले मेरो अगाडि बाटो तयार पार्नेछ। र चाँडै नै प्रभु, जसलाई तपाइँ खोज्नुहुन्छ, उहाँको मन्दिरमा आउनुहुनेछ; र करारको परी जसलाई तपाइँ चाहानुहुन्छ, हेर, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ! सेनाहरूका प्रभु भन्नुहुन्छ। "
म तिमीलाई भेट्न आएको हुँ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मेरो लागि एक सन्देशवाहक मेरो अघि बाटो तयार पार्नेछ। त्यसोभए यदि कसैले तपाईंलाई मसीह हुनुहुन्छ भनेर बताइरहेको कसैले देख्यो भने तपाईंले त्यो संशयित मसीहलाई जाँच गर्नु पर्छ। यदि उनी बेतलेहेममा जन्मेका हुन् भनेर पत्ता लगाउन जे पनि गर्नुहोस् र उसकी आमा कुमारी थिइन कि ऊ जन्मिएको थियो। अन्तमा, हामीसँग एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया छ कि हामी जस्तो संशयवादीहरूले शंका गर्न सक्छन् मसीह वास्तविक हो कि होइन भनेर जाँच गर्न सक्छन्। हाम्रो कथा बप्‍तिस्मा दिने जोन नाम गरेको दूतलाई भेटेर जारी छ जसले इस्राएलको मानिसहरूलाई येशूका निम्ति तयार पार्नुभयो र उहाँ देखा पर्नुहुँदा उनीहरूलाई येशूकहाँ पठाउनुभयो।
5. Wird LEIDEN für uns (Jesaja 53,4-6).«
वास्तवमा, उहाँ हाम्रो बिरामी बोक्नुभयो र हाम्रो पीडा उहाँ आफैंमा लिनुभयो ... उहाँ हाम्रो पापको लागि घाइते हुनुभयो र हाम्रो पापको लागि कुटपिट गर्नुभयो। शान्ति पाएपछि उनी दण्डित हुन्छन् र उसको चोटले हामी निको भयौं।
मुक्तिदाता जसले हाम्रो सबै शत्रुहरूलाई सजिलै वशमा राख्नुहुन्छ, साटोमा उसले कष्टमाथि विजयमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। ऊ अरूलाई घाइते गरेर जित्न सक्दैन, ऊ आफैलाई चोट पुर्‍याएर जित्छ। यो हामीलाई सोच्न गाह्रो छ। तर यदि तपाइँ सम्झना गर्नुहुन्छ, उत्पत्तिले ठीक त्यहि कुराको भविष्यवाणी गर्‍यो। उसले सर्पको टाउको कुच्यो, तर सर्पले उसको खुट्टामा हिर्काउँथ्यो। यदि हामी नयाँ नियममा इतिहासको प्रगतिलाई हेर्दछौं भने, हामी पाउँछौं कि तपाईंको कुकर्मको निम्ति दण्ड तिर्न मुक्तिदाता, येशू कष्ट भोग्नुभयो र मर्नुभयो। तपाईंले मर्नु भएको मृत्यु मर्नुभयो त्यसैले तपाईंले उसलाई भुक्तानी गर्नु पर्दैन। उहाँको रगत पोखिएको थियो ताकि तपाईं माफी पाउन सक्नुहुन्छ, र उहाँको शरीर चकनाचूर भयो कि तपाईंको शरीरले नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सक्छ।
6. Alles sein wird, das wir BENÖTIGEN (Jesaja 9,5-6).
येशू हामीलाई किन पठाइएको थियो: «हाम्रो लागि बच्चा जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा छोरा दिइन्छ, र सरकार उसको काँधमा टेक्यो; र उनको नाम चमत्कार सल्लाह, भगवान हीरो, अनन्त पिता, शान्तिका राजकुमार हो; ताकि उनको शासन ठूलो हुनेछ र त्यो शान्ति कहिलै अन्त नहोस्।
के तपाइँलाई कुनै निश्चित जीवन परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह र बुद्धिको आवश्यकता छ? भगवान तपाईंको अद्भुत सल्लाहकार बन्न आउनुभएको छ। के तपाईंसँग कमजोरी रहेको छ, जीवनको क्षेत्र जहाँ तपाईं बारम्बार दम गर्नुहुन्छ र तपाईंलाई बल चाहिन्छ? येशू बलियो पक्षमा आउनुभयो जो तपाईंको पक्षमा हुनुहुन्छ र उहाँको असीम मांसपेशीहरू तपाईंको लागि खेल्न दिन तयार हुनुहुन्छ। के तपाईंलाई एक मायालु बुबा चाहिन्छ जो सधैं तपाईंको लागि हुन्छ र तपाईंलाई कहिले निराश पार्दैन, जस्तो कि सबै जैविक पिताहरूले अनिवार्य रूपमा गर्छन्? के तपाईं स्वीकृति र प्रेमको लागि भोकाउनुहुन्छ? येशू तपाईंलाई एक बाबा को लागी पहुँच दिन आउनुभएको थियो जो सधैंभरि बाँच्नुहुन्छ र अत्यन्त भरपर्दो हुनुहुन्छ। के तपाईं डराउनुभएको छ, डराएको छ र बेचैन हुनुहुन्छ? परमेश्वर तपाईमा शान्तिमा रहन आउनुभयो जुन अपरिवर्तनीय छ किनकि येशू स्वयं त्यो शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ। म तिमीलाई केहि भन्छु: यदि मैले यो मुक्तिदाताको खोजी गर्न प्रेरित नभएको भए, म अहिले हुने थिएँ। मलाई उसले के प्रस्ताव गर्दछ मलाई चाहिन्छ। उसले आफ्नो शासन अन्तर्गत राम्रो र समृद्ध जीवन प्रदान गर्दछ। येशू आउनुहुँदा ठीक यही कुरा घोषणा गर्नुभयो: "परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ!" जीवनको एक नयाँ तरीका, जसमा परमेश्वर राजाको रूपमा शासन गर्नुहुन्छ। जीवनको यो नयाँ तरिका अब येशूलाई पछ्याउने सबैलाई उपलब्ध छ।
7. Ein Königreich aufrichtet, das NIE ENDET (Daniel 7,13-14).
“मैले यो अनुहार रातमा देखेको थिएँ, र मानिसका पुत्रजस्तै स्वर्गको बादलहरू लिएर आयो, र जो प्राचीन थियो, उहाँ समक्ष आयो। यसले उसलाई सामर्थ्य, सम्मान र साम्राज्य प्रदान गर्‍यो सबै विभिन्न भाषाहरूका सबै मानिसहरू र मानिसहरूका सेवा गर्न। उहाँको शक्ति अनन्त छ र कहिले पनि हराउँदैन, र उहाँको राज्यको अन्त छैन।
जोन स्टोन्काइफर द्वारा